Miis-cuntada marmarka Dabiiciga ah ee Jumlada ah U dejiyay guriga iyo jikada
Jikada & Cuntada
Gogol jiiska & Qaabka Mindida
Saxan madadaalo leh
Alaabtan si guul leh ayaa loogu daray gaariga!
Daawo Gawaarida wax iibsiga
Ku noqo wax iibsiga U gudub Checkout
Alibaba alaab-qeybiyaha sariirta geedka calaamadeeyaha beerta
Hal-abuurnimo sawir darbi ah oo dabiici ah
Summada warshadda dhagax-dhagaxa ee jumlada ee jaban oo leh Stainle...
qaabka wadnaha calaamado dhagaxa dhirta tags geed caleen garde...
Tusaale marmar cad oo jumlo ah oo bilaash ah
Sawir alwaax ah oo warshad leh oo tayo sare leh oo marmar ah oo heer sare ah ...
Sanduuqa jeexjeexa/sanduuqa buniga ah/sanduuqa hadyad
Slate saxan goynta guddiga Warshada cusub Iibka W...
Wershada Shiinaha Jumlad caadadii marmar iyo farmaajo alwaax ah...
Qurxinta Qadiimiga ah ee ugu caansan DIY casriga ah ee Ha...
Warshada Shiinaha Cosen Tooska ah Jumlo 2 Tier Slate Ca...
Dhadhaminta taarikada alaabta miiska ee gacanta lagu sameeyo
Guriga iyo Beerta Farsamada Gacanta Cunto Macmacaan Marble ah...
Qalabka jumlada ee warshadda looxa jiiska madow ee dabiiciga ah ...
Shakhsiyeed Qurxinta Wareegga Qurxinta Jewe...
Dabaqa Dabiiciga ah ee Hexagon Slate saxaarad u adeegta oo leh Cooper ...
Looxa jiiska madow ee dabiiciga ah ee jumlo ahaan
Xulashada Sare ee Raaxada Square Marble Xeebeedka Alwaax ee D...
Suxuunta & Suxuunta
Wareeg, Qaab caadadii
Xulashada booska qolka:
Waara, kaydsan, deegaan-saaxiibtinimo leh
Jiangxi, Shiinaha, Jiangxi, Shiinaha (Dhul-weynaha)
Nooca agabka cashada:
Taarikada Wareegga Charger
saxan marmar ah
La-xiriirka Cunto Badqab leh
Sharaxaad: saxan farmaajo
Cabirka: Φ39.9×13cm ama caado
dhame: Cirif qallafsan/goyn, oogada dabiiciga ah
Baakad: shrinkwrap/xag-duub/sanduuqa brown/sanduuqa hadyada
Logo: laysarka/screen-xariir/Daabacaadda UV
Dekadaha Dhoofinta: Ningbo/Shanghai/Jiujiang
Waqtiga dirida: 30 maalmood
Shuruudaha Lacag-bixinta:T/T ama L/C
S: Ma leedahay warshad kuu gaar ah?
J: Haa, waxaanu nahay warshad leh waayo-aragnimo 10 sano ka badan oo ku saabsan macdanta, farsamaynta, wax soo saarka iyo suuq-geynta.
S: Aaway warshadaada?
A: Our warshad, daboolaya 21044.28 afar geesle mitir, waxay ku taallaa Xingzi, Jiujiang, gobolka Jiangxi halkaas oo kaydka kaydka ee ugu horreeya Shiinaha.
S: Ma leedahay dhagaxyo kuu gaar ah?
J: Haa. Waxaan leenahay liisanka macdanta aShatiga Badbaadada Shaqada afar dhagax oo loo qoondeeyay.
S: Ma haysaa shahaado la xidhiidha?
J: Haa. Warshadayagu waxay dhaaftay BSCI oo ay TUV-hu baadhis ku samaysay. Ururinta agabka miiska cuntada waa badbaadsanaanta xidhiidhka cuntada ee 84/500/EEC iyo 2005/31/EC, LFGB .
S: Immisa nooc oo badeecooyin ah ayaa ku jira warshadaada? Waa maxay waxyaabaha gaarka ah ee warshadaada?
J: Inta badan afar goobood waxaa ka mid ah cunto, nolol, beerayn iyo wax bixin. Waxaan danaynaynaa faa'iidada macaamiisha waxaanan ku faanaa 0% cabashada 10kii sano ee la soo dhaafay.
S: Horta ma arki karaa muunadaada?
J: Dabcan. Waxaan ku faraxsanahay inaan ku siinno muunad qiimayntaada oo lacag la'aan ah, qaadista xamuulka.
S: Ma dhagax dabiici ah baa?
J: Haa, dhammaan qaybaha waxaa laga sameeyay slate dabiici ah, oo gacanta lagu dhammeeyay gees qallafsan ama la jaray. Suufyadayadu waa kuwo u gaar ah qaab ahaan, muuqaal ahaan, midab, taas oo macnaheedu yahay in aanay laba qaybood isku mid noqon doonin.
S: Slate ma jilicsan yahay? Miyay jabi doontaa haddaan tuuro?
J: Adag la mid ah weelka ama galaaska. Looxa saleefeedka caadiga ah ee 5-6mm ah wuxuu xamili karaa isagoo daraasiin jeer miisaankiisa korkiisa saaran. Taasi waa sababta aan u gooyn karno si khafiif ah oo aan si fudud u jabin.Laakiin waxay u badan tahay inay jabto haddii shay adag ku dhufto ama ku dhaco meel adag. Haddii aad ula dhaqanto sida weelka jikada ama dhalada, si fiican ayay u fiicnaan doontaa.
S: Sidee loo nadiifiyaa slate?
J: Si fudud ugu tirtir isbuunyo qoyan ama saabuun dhexdhexaad ah si aad u nadiifiso. Saxan saxan ah, haddii aanay xagga hoose cagaha EVA ku jirin, waxay ahaan doontaa badbaado makiinada weelka dhaqda.
S: Maxay yihiin sifooyinka uu leeyahay xaashida?
J: Slate waa dhagax aad u waara oo laga sameeyay dhulka in ka badan 200 milyan oo sano ka hor. Waxa uu leeyahay heerka nuugista biyaha oo aad u hooseeya, taas oo ka dhigaysa mid aad u fiican xaaladahayaga dibadda. Xataa iyada oo leh sifooyinkeeda khafiifka ah, aad bay u waarta oo xoog badan tahay waana sababta loogu isticmaalo alaabta miiska, sida farmaajada, meelaynta, saxanka saxanka, cuntada wareega qaabka valentines saxan maalinle ah, koob koob iwm.
S: Sidee loo daryeelaa slate?
J: Si aad u ilaaliso sabuuraddaada sanadaha soo socda, ku tirtir dhibic ama laba saliid macdaneed oo heer wanaagsan ah ilaa laba jeer sannadkii. Saliidda macdantu waxay caawisaa ilaalinta hufnaanta slate waxayna ilaalisaa muuqaal yar oo sifayn ah. Ka digtoonow foornada iyo microwave-ku maahaku habboon.
Halkan ku dhufo xog dheeri ah
Hore: Tusaalaha bilaashka ah 2020 cusub oo marmar ah oo jumlo ah oo loox alwaax ah mindi loox marble farmaajo goynta guddiga adeega cashada saxan guri
Xiga: Alibaba alaab-qeybiyaha sariirta geedka calaamadeeyaha beerta
Cunnada Jikada Mini Custom Cheese Board oo leh...
Fasalka Cunto Cabbitaan Bamboo wareeg ah oo la moodi karo
Qurxinta Wareegga Qurxinta ee Shakhsi ahaaneed...
Saxarada Dabiiciga ah ee Warshada iyo Acacia...
Shaaha Bamboo Dabiiciga ah ee Fagaaraha Farsamada Farshaxanka ugu cusub ...
Miiska Arooska Mini Dabiiciga ah Stone Black Slat...
Beerta warshadaha, Magaalada Lushan, Jiujiang, Jiangxi, Shiinaha